DEG DEG: Shir u dhaxeeya maamulka Puntland iyo Al-saadicuuna bil-xaq oo ka socda Garoowe | TOP NEWS
DEG DEG: Shir u dhaxeeya maamulka Puntland iyo Al-saadicuuna bil-xaq oo ka socda Garoowe
By Tifaftiraha Somalida Maanta on April 25, 2017 No Comment
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Garowe ee xarunta Maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in hada uu socdo kulan u dhaxeeya xubno ka tirsan ururka Al-saadicuuna bil-xaq iyo masuuliyiinta Gobolka Nugaal ee Maamulka Puntland oo uu ugu horeeyo Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar C/laahi Faraweyne.
Goobjoogayaal ayaa soo sheegaya shirka in uu yahay mid ay yeelanayaan Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar C/laahi Faraweyne, Saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland iyo xubno ka tirsan ururka Al-saadicuuna bil-xaq, balse ilaa hadda saxaafadu aysan helin xog rasmi ah.
Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka looga hadlayo xubnahan go’aansaday in ay ka mid yihiin ururka Al-saadicuuna bil-xaq in ay ka laabtaan fikirkaasi, saxaafadana ay u sheegaan in ay ka laabtaan.
Dhowaan ayay aheyd markii Maamulka Puntland uu Degaanadiisa ka mamnuucay ururka Al-saadicuuna bil-xaq oo looga dhawaaqay dalal uu ka mid yahay Soomaaliya.
DEG DEG: Shir u dhaxeeya maamulka Puntland iyo Al-saadicuuna bil-xaq oo ka socda Garoowe added by Tifaftiraha Somalida Maanta on April 25, 2017